Nnwom 72 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn hene de asomdwoe bɛba
“Ɔtreneeni bɛyɛ frɔmfrɔm” (7)
Obedi nnipa so fi po ano akosi po ano (8)
Obegye wɔn afi atirimɔdensɛm mu (14)
Nnɔbae bebu so wɔ asaase so (16)
Ayeyi nka Onyankopɔn din daa (19)
Ɛfa Solomon ho. 72 O Onyankopɔn, fa w’atemmusɛm ma ɔhene,Na fa wo trenee ma ɔhene ba.+ 2 Ma ɔmfa trenee nni wo nkurɔfo asɛm mma wɔn,Na ɔmfa atɛntrenee nni mma mmɔborɔwafo a wɔsom wo.+ 3 Ma mmepɔw mfa asomdwoe mmrɛ ɔman no,Na nkoko mfa trenee mmra. 4 Ma onni mmoa* ɔman no mu mmɔborɔwafo;Ma ontwitwa nnye ohiani mma,Na ommubu osisifo pasaa.+ 5 Owia da so wɔ hɔ yi, wobesuro wo,Na ɔsram wɔ hɔ yi,Wobesuro wo wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 6 Ɔbɛyɛ sɛ osu a ɛtɔ gu sare a wɔatwa so so,Ɔbɛyɛ sɛ obosu a ɛfɔw asaase.+ 7 Ne bere so no, ɔtreneeni bɛyɛ frɔmfrɔm,*+Na asomdwoe pii bɛba+ akosi sɛ ɔsram befi hɔ. 8 Obedi nnipa so* fi po so akɔ po so,Na wadi ade afi Asubɔnten no* ano akosi asaase ano.+ 9 Nnipa a wɔtete sare so bɛkotow n’anim,Na n’atamfo bɛtaforo mfuturu.+ 10 Tarsis ne nsupɔw so ahemfo de tow bɛba.+ Saba ne Seba ahemfo nso de akyɛde bɛba.+ 11 Ahemfo nyinaa bɛba abɛkotow n’anim,Na amanaman nyinaa bɛsom no. 12 Obegye ohiani a osu frɛ no,Ne mmɔborɔwa ne nea onni boafo nso. 13 Ɔbrɛfo ne ohiani asɛm bɛyɛ no mmɔbɔ,Na obegye ahiafo* nkwa. 14 Obegye wɔn* afi nhyɛso ne atirimɔdensɛm mu,Na wɔn mogya bo bɛyɛ den wɔ n’ani so. 15 Ma ɔntena nkwa mu na wɔmmrɛ no Saba sika kɔkɔɔ.+ Ma wɔmmɔ mpae mma no daa,Na wonhyira no daa nyinaa. 16 Aduan* bebu so wɔ asaase no so;+Ebebu so akodu mmepɔw atifi, Ɔhene no nnuaba bɛyɛ kama sɛ Lebanon de,+Na nnipa bɛyɛ frɔmm wɔ kurow no mu te sɛ asaase so afifide.+ 17 Ma ne din ntena hɔ afebɔɔ;+Owia da so wɔ hɔ yi, ma ne din nyɛ kɛse. Ma nkurɔfo mfa no so nnya nhyira,+Na aman nyinaa mfrɛ no anigye. 18 Ayeyi nka Yehowa Nyankopɔn a ɔyɛ Israel Nyankopɔn no;+Ne nkutoo na ɔyɛ anwonwade.+ 19 Ayeyi nka ne din kɛse no daa;+N’anuonyam nkata asaase nyinaa so.+ Amen ne Amen. 20 Yese ba+ Dawid mpaebɔ no nyinaa aba awiei.
^ Nt., “Ma ommu atɛn mma.”
^ Nt., “bɛfefɛw.”
^ Anaa “Obenya ɔmanfo.”
^ Anaa “ahiafo kra.”
^ Anaa “Obegye wɔn kra.”